Ingane ngayinye yenza inoculations ehlukahlukene. Ngonyaka wokuqala wokuphila, kunezinhlobo eziningi zokugoma ezitholwa ngaphandle kweminyaka elandelayo. Futhi emva kwalesi sikhathi ingane iqala ukuhlola ukuhlolwa kweMantoux. Kulokhu futhi kuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko. Uzofunda ukuthi awukwazi yini ukugcoba iMantoux, nokuthi ngabe kuvinjelwe okunjalo nhlobo. Thola nokuthi yiziphi izinkolelo ezihlobene nale mpendulo.
Kungani ungeke unganise uMantoux?
Kungakanani ongakwazi ukumanzisa ingane yaseMantou futhi ngani? Lona umbuzo odokotela abaningi abakuzwa emahhovisi abo. Lesi sitatimende sifike kithi kusukela esikhathini eside esidlule. Khona-ke ukuhlolwa kwe-tubulin kwasetshenziselwa ngqo isikhumba esikhishwe. Kulesi simo, odokotela abavunyelwe ukuxhumana nanoma yikuphi uketshezi ngaphambi kokuhlola ukuphendula. Uma kungenjalo, umphumela kungenzeka ukuthi awuvumelekile noma awunamanga amanga. Isikhumba esikhulile singaphulukisa isikhathi eside, futhi izinto ezisetshenziswayo zingasuswa nje ngamanzi. Ngenxa yalesi sizathu, umthelela onjalo ezindaweni eziphathwayo wawuvinjelwe ngokweqile.
Umuthi wokugoma weMantoux: kungakanani okungenakunyakaziswa?
Uma usebenzisa i-tuberculin test, odokotela babenqatshelwe ukuxhumana noma yikuphi uketshezi endaweni ekhethiwe kuze kube yizinsuku ezintathu. Ochwepheshe abaningi belebhu bakholelwa ukuthi kungenzeka ukususa ukusabela okwenzeka ngosuku lwesibili ngemuva kokusetshenziswa kwezinto, kodwa kuwumkhuba wokunamathela ekupheleni kwezinsuku ezintathu. Ngokuvamile, ukuhlolwa kweMantoux kwenziwa ekuqaleni kwesonto elisebenzayo. Lokhu kusenza sikwazi ukulinganisa umphumela ekupheleni kwalesi sikhathi.
Zingaki izinsuku ongeke ukwazi ukumanzisa i-Mantoux: inganekwane neqiniso
Njengamanje, uhlolo lweMantoux lwenziwa ngokuphathwa okungaphansi kwesidakamizwa. Naphezu kwalokhu, odokotela abaningi banombono oyingqayizivele futhi ongenakuphikwa wokuthi umuthi wokugoma akufanele utholakale kunoma yikuphi uketshezi. "Kungakanani ongakwazi ukuwamanzisa uMantoux?" Cela abazali abangenalwazi. Odokotela kulo mbuzo banikeza impendulo ecacile: "Ngaphambi kokuhlola ukusabela." Ingabe konke kwenzeka?
Embuzweni wokuthi i-Mantou ayikwazi yini ukugcoba, ongoti abanolwazi abakwazi ukunikeza impendulo ehlakaniphile. Kukhona nje kuphela ukuthi ukufaka uketshezi onoculation kungenzeka. Ngenxa yokuthi esikhathini sethu isampuli ye-tuberculin ijojo ngqo ngaphansi kwesikhumba, amanzi angeke angene futhi aphazamise ukusabela. Kule nkinga, kungakanani ongakwazi ukukhipha iMantoux?
Odokotela bathi akudingekile ukuba uhambe ufake isandla sakho ngaphansi kwamanzi masinyane emva kokufakwa kwesampula. Ngesikhathi sokuphumula okungahambi kahle, ukwehla kwemanzi kungangena futhi kuthinte ukusabela kwesampula. Kodwa kufanele kuqaphele ukuthi kakade ngokweqile emva kwehora elilodwa umgodi ugcwele igazi egazini futhi awuvumeli uketshezi oluhlukahlukene ukungena ngaphakathi. Kubonakala ukuthi inqubo enjalo ivela kakhulu kakhulu. Kodwa-ke, odokotela baphinde baqinisekiswe futhi babuze abazali ukuba baqinisekise ukuthi ingane yabo ayifuni igciwane esikhathini esizayo.
Ngaphezu kwamanzi, ukusabela kungathinteka yizici eziningi. Ngakho-ke, indawo yokungeniswa kwesampula yeMantoux ayikwazi ukuhlushwa, igxilwe futhi ihlatshwe ngokukhethekile. Uma kungenjalo, ukusabela kungase kube okungamanga. Kulolu daba, odokotela banquma ukwelashwa okufanele, okungeke kube nomhlomulo emzimbeni onempilo. Futhi, ngaphambi kweMantoux, kufanelekile ukucabangela isikhathi sokugoma. Ukusabela kungase kuthonywe umgomo owenziwe ngaphambilini. Ikakhulukazi uma kusetshenzwa amabhaktheriya nama-microorganisms.
Manje uyazi kahle ukuthi i-Mantou ayikwazi yini ukumanzisa ingane noma intsha. Lapho uqhuba isilingo, kudingeke ukhulume nodokotela wezingane zakho futhi ufunde zonke iziqili zalesi sivivinyo. Ochwepheshe onolwazi uzokutshela ngesikhathi esiqondile lapho umuntu engakwazi ukuthonya isakhi somjovo ngamanzi ahlukahlukene. Kudingeka futhi ukhumbule ukuthi uma udokotela evumela ukuthi uhlaziye uhlolo lweMantoux, lokhu akusho ukuthi udinga ukuthatha ibhashi elishisayo noma uvakashele ibhuku lokugeza. Gwema izinsuku ezimbalwa ezilandelayo kulezi zinqubo. Yenza okuthandayo umphefumulo olula. Kuphela kulokhu kuzokwenza ukuthi ukusabela kube okunembile futhi okunokwethenjelwa ngangokunokwenzeka.
Beka yonke imithi ngesikhathi. Isivivinyo seMantoux senziwa njalo ngonyaka, cishe ngasikhathi sinye. Ukusabela kususwe izinsuku ezintathu emva kokuphathwa kwezidakamizwa.
Umfutho wegazi ophezulu: izimpawu kanye nokwelapha
I-insulin isringana. Kuyini lokhu?
Le tachycardia i-paroxysmal ngokuzumayo.
"Intaba" ye-sanatorium, eCrimea. Ukwelashwa e-Livadia: ukubuyekezwa, amanani
Ukuhlolwa kwemithi kuyisidingo semithi yesimanje
Yokukhanya Salon "Aykraft yokukhanya": Izibuyekezo
Indaba emfushane kanye abadlali: "Igazi Bad" kanye ubugebengu passion
Ukudla ngaso sonke isikhathi: amakhowe, amazambane athosiwe
Bani Kaluga: amakheli, izithombe, izibuyekezo
Ngiyaqonda iphupho yini amaphupho indoda ifa?
"Bioderma Atoderm" (ukhilimu): Izibuyekezo
Amahhotela Rybinsk: amakheli, ukubuyekezwa